Izinto eziluncedo mechanical ingalo Umatshini bokwakha - China Longkou Fushi Ukupakisha
Food Container Umshini Ndiyila Machine
FS-YTA1100 / 1400 Robot Ingalo Umshini Ndiyila Cutting ingqokelela Machine
FS-YTA100 / 1100 Umshini Ndiyila Cutting ingqokelela Machine
FS-YTA600 / 1000 Umshini Ndiyila Cutting ingqokelela Machine
Fact-YT600 / 1000 Umshini Ndiyila Cutting ukunqunqa Machine
Isithombo Itreyi Machine
Amagwebu Itreyi Umshini Ndiyila Machine
Extrusion wokulaminetha Machine
PE Foam Sheet wokulaminetha Machine
Iziqhamo Ukwenziwa machine
Fruit Ukuhlela Machine
Iziqhamo Ukuhlamba isagcwele Grading Machine
Izinto eziluncedo ingalo ngoomatshini Umatshini bokwakha
A dvantages of ingalo ngoomatshini Umatshini bokwakha
Ndiyila indawo ekulu. Indawo ezisebenza 1100 × 1400mm, ngu 1.4 amaxesha ezinkulu kuno umatshini emveli, oko kunokwenziwa amalungiselelo iibhokisi ngaphezulu. Zicingele ukuba umfuziselo emveli sande ungahlela iibhokisi-20, kunokwenziwa amalungiselelo iibhokisi 28 umfuziselo ngoomatshini sande.
Isantya Production fast. ibhokisi heater ukusahlula ube zahlulo zithathu, isantya ukusika ngesanti kubunzulu baphantsi ngokukhawuleza, kwaye sebenzisa iingalo koomatshini ukuba ncanca iimveliso, zonke iindlela ngasentla ukunciphisa ixesha lomsebenzi lonke.
⑴ ibhokisi Ubushushu ubude bayo bungama 4.4m, noko yandisa ixesha ubushushu, uphambuke ezintethweni phezu lobushushu eliphezulu kunyibilika kwimakhishithi, kwangaxeshanye ukwenza isiphumo sewayini lesibini ngcono.
⑵ fracturing isilinda likhulu. Traditional imodeli ngamanzi cylinder wamzalela yi 160mm, lo gama i mechanical imodeli i-220mm, indawo zoqhagamshelwano kwandisa 1 xesha, uxinzelelo unit ndawo unciphisa, ukuze wandise ubomi bayo. Ngelo xesha, iimpembelelo wesekethe ngesanti kubunzulu baphantsi valve ukuncipha solenoid kunye, wandise ubomi babo kakhulu.
⑶ Mechanical iimveliso ingalo abemaninzi macala omabini, leyo konga yokuthutha ibhanti ixesha output imodeli yemveli kaThixo, ukunyusa isantya imveliso kwi yonke.
Isantya imveliso imodeli ingalo Mechanical unako ukufikelela 18-22cycles / min, iyure nganye unako ukuvelisa 33000-37000pcs ibhokisi sasemini. Nangona Isantya imveliso imodeli yemveli 12-15cycles / min, okt iyure nganye unako ukuvelisa 12000-18000pcs, kuphela ukusebenza isiqingatha imodeli ingalo ngoomatshini.
Le nkcazelo edge phakathi kwebhokisi mabini ukungunda imodeli bemveli kufuneka ube malunga 2cm, ngoxa imodeli entsha ingalo ngoomatshini alikapheli 1cm. Oku kunciphisa kakhulu inkunkuma, wenze kweemveliso ezigqityiweyo ngakumbi.
Gcina kwawo, inciphise neendleko. Le mifanekiso mibini sebenzisa eqela labasebenzi efanayo, kufuneka 3 abasebenzi / shift, ngoko sebenzisa imodeli entsha ingalo ngomatshini linokuwehlisa iindleko zemveliso, wenza ingeniso engakumbi.
Kwanya iplagi iziqulathi ukutya up. Nditsho izikhongozeli musa ungasondeli ngaphandle ngempumelelo, oku akusayi kuchaphazela inyathelo elilandelayo.
Ukucanda indawo Ungasa: eqhutywa yi-injini, kuya kuba nenzuzo enkulu ukuba ukutshintsha jeli kwaye ungagcina ixesha ngumngundo ukutshintsha.
eliminators Electrostatic ibekwe kwi ukusika indawo, yaye indawo yokugcina, oko ukuphelisa static eziveliswa ngexesha lenkqubo bokwakha. Ngamana Qinisekisa ukhuseleko producting.
NaLindiili sikhokelo ezenziwe insimbi, zomelele ngaphezu aluminum neentsimbi guide
ixesha Post: Jul-12-2018
May 1, 2011, China waphakamisa kukuvalwa fo ...
Idilesi: LANGAO INDUSTRIAL EZONE, LONGKOU CITY, Shandong KWIPHONDO, 265701, CHINA